SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 26aad oo xiiso leh. – Filimside.net
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 26aad oo xiiso leh.
Sheekada waxay qeybtii hore inoo mareysay:
Habeenkii xigay waxay sheekada ku bilowday waxaa isoo gaartay boqorow in wiilkii uu yiri markii aan qasrigii galay waan fariistay waxaana ii imaaday gabadhii oo ku labisan taaj lagu xardhay lu’lu’ iyo yaaquut waxayna ku labisneyd dhar hadii aad aragtid aad quruxdiisa la yaabeysid intaan iyadana quruxdeeda la gaarin.
Markii ay I aragtay ayay ii qososhay waxayna igu tiri “xaqiiqo miyaa waxaan arko oo ma ila joogtaa mise waa indhaheyga?”
Markaas ayaan ku dhahay waa xaqiiqo oo waan ku hor fadhiyaa.
Markaas ayay I dhahday “bal soo dhawow hurdo iyo cunto waadba ii diidee”
Waxaan ugu jawaabay “aniguba kula mid ayaan ahay oo waxaan cunto iigu dambeysay maalintaan adiga ku arkay”
Markaas ayaan cabaar fariisanay oo sheekeysanay kadib waxaa la ii keenay raashiin kala noocyo ah oo qofkasta ku riyoodo inuu maalin uun cuno wuxuuna ahaa mi si heer sare loo kariyay aadna u macaanaa markaas ayaan cunay ilaa aan ka dhargay kadibna waxaa la ii keenay farxal iyo catar caraf badan.
Kadib ayaan waxaan u gudubnay qol aad u qurux badan si heer sarana loo goglay markaas ayay tixdaan yar igu tiri “hadii aan ogaan laheyn imaatinkaada waxaan kuu gogli lahaa qalbigeyga dhabankeenana dhulka ayaan kuu dhigi laheyn”
Markaas ayay iiga warantay jaceylka ay ii qabto heerka uu ka joogo ana midka aan u qabo ayaan uga waramay.
Kadibna inaan kaftano oo aan ciyaarno ayaan bilowno waxaana noogu xigtay inaan si tartiib tartiib isugu dhawaanay ilaa aan hab isi siinay midkeenana uu kan kale isku duubay waxaana noogu xigtay dhunkasho aan xad laheyn sidii ayaana aheyn ilaa ay mid kamid ah jaariyadihii noo keentay casiir aad u macaan markaas ayaan cabnay.
Kadib ayaan anigii iyo gabdhii quruxda badneyd si wadajir ah habeenkaas u seexanay mana isoo marin cimrigey intaan noolaa habeen ka macaan badan.
Markii subaxii la garaay ayaan soo bixiyay lacagtii jeebka iigu jirtay ee 50ka diinaar aheyd gabadhii ayaana siiyay markaas ayay igu dhahday “xabiibi goormee markale is aragnaa?” waxaana ugu jawaabay “caawo cishaha kadib ayaan kuu imaan” waana kasoo tagay.
Kadib waxaan soo aaday suuqii anigoo ganacsigii guda galay waxaana duhurkii markii la gaarayu dhiibay hilib ido oo duban kadibna habeenkii markii la gaaray ayay lacag la eg intii shalay soo qaatay waxaana soo aaday qasrigeedaa markii aan u imid ayaa la isoo dhaweeyay waxaana la ii keenay casho heer sare waana casheynay kadibna qolkii ayaan hadana wada seexanay subaxii markii la gaaray ayaan lacagtii siiyay waana soo baxay.
Waxaan sidaas ahaa mudo dheer anoo habeen kasta u geynaayay 50 diinaar ilaa ay gabi ahaanba lacagtii iga dhamaatay waxaana noqday mid aan waxba heysan markaas ayaan shalaayay anoo niyada iska leh sheydaan ayaa ku duufsaday.
Waan shiiday jeebkeygana wax lacag ah kuma jirto anigoo xaaladaas ku sugan misna suuqa meel ciriiri ah dhex maraayo ayaan arkay askari jeebkiisa ka muuqato mandiil lacag ah (boors yar oo lacagta lagu rito) markaas ayay lacagtii damac iga gashay.
Gacanteydii ayaan taagtay waxaana galiyay jeebkii askarigii mandiilkii lacagta ahaa ayaana kasoo bixiyay markaas ayuu askarigii dhankeyga soo fiiriyay shaki ayaana galay asigoo jeebkiisa gacanta la aaday wuxuuna dareemay in lacagtii ay maqantahay.
Markaas ayuu bahal dharbaaxo aan la wareeray igu sii daayay wuxuuna ahaa askari xoog badan waxaana igu soo shamuumay dadkii meesha maraayay ayagoo bilaabay in askariga iga celiyaan waxayna lahaayeen “naxariis darnidaa maxaad wiilka sidaas ugu galeysaa?” asigana wuxuu ugu jawaabay “kan waa xaaraami waana tuug oo lacag iga xaday”
Aniga waqtigaas waxaan ahaa mid wareersan hadalada dadka si fiican uma maqleynin oo jugtii ayaa xoogaa miirka iga qaaday waxaana maqlaayay dadkii oo leh “wiilkaan waa miskiin waxna ma xadin” dadkana qaar waxay ahaayeen kuwa aniga I difaaco qaarna askarigii ayay rumeysteen ilaa uu waaligii magaalada iyo qaar kamid ah xukaamta meesha ka imaadeen.
Weyn nagu soo leexdeen iyagoo dadka weydiiyay “maxaa halkaan ka dhacay?”
Markaas ayaa waxaa hadlay askarigii asigoo dhahay “amiirkii mu’miniintow kani waa xaaraami tuug ah waxaana ahaa mid jeebka ku sita mandiil buluug ah waxaana iigu jirtay 20 diinaar wuuna iga xaday anoo meel ciriiri ah maraayo.
Markaas ayuu waaligii askarigii weydiiyay “qof miyaa kula socday?”
Markaas ayuu askarigii dhahay “maya waxaan ahaa mid kaligiis socdo”
Markaas ayuu waaligii amar ku bixiyay in la ibaaro, kadibna waa la I baaray ilaa laga soo bixiyo mandiilkii lacagta ku jirtay, markaas ayuu waaligii lacagta tiriyay wuxuuna ogaaday in 20 diinaar tahay warkii askariga sheegaayayna uu xaqiiqo yahay.
Markaas ayuu waaligii xanaaqay wuxuuna dhahay horteyda hala soo istaajiyo markii hortiisa la I geeyayna wuxuu dhahay waryaa wiilow adiga miyaa lacagtaan xaday?
Markaas ayaan xoogaa ka labo labeeyay balse waxaan go’aansaday inaan runta sheego waxaana ku dhahay haa anigaa xaday.
Markaas ayuu waaligii ila yaabay sidan runta ugu dhiiraday wuxuuna u wacay marqaatiyaashii kadibna markii hadalkeyga la diiwaan galiyay ayaa gacantii la iga gooyay waaligiina wuu iska tagay.
Markii gacanta la iga gooyay ayay dadkii igu soo xoomeen igana naxeen iyagoo biyo iyo baad I siiyay xitaa waxaa iga naxay askarigii wuxuuna isiiyay mandiilkii lacagta ku jirtay asigoo ileh “adiga waxaad tahay wiil wanaagsan macquulna ma ahan inaad tuug tahay hadii uu xukunka waaliga gaari laheyna waan iska kaa cafin lahaa” (xukun ama xad alle marba hadii garsoorka la hor geeyo cafis wax la dhaho ma jiraan).
Markaas ayaan anigoo aad u xanuunsanayo meeshii kasoo tagay gacanteydii la gooyayna waxaan ku qariyay jeebkeyga ilaa aan gabadhii uga imid.
Markii aan u imid ayay wajigeyga is badal ka dareentay mana aysan arkin gacanteyda maadaama aan aniga ka qariyay waxayna igu tiri “xabiibii maxaa kugu dhacay oo la murugeysantahay wajigaaga maanta isbadal ayaa ka muuqdee?”
Lkn waxba uma sheegin waxaana iska galay qolka kadibna way iga soo daba gashay iyadoo iga sugeyso in sidey wax u jiraan u sheego balse uma jawaabin ilaa habeenkii laga gaaray.
Habeenkii markii la gaaray waxay ii keentay casho lkn waan ka cudur daartay inaan wax cuno anoo ka baqayo iney I aragto anoo bidixda wax ku cunaayo.
Kadib ayaan seexday markii aan jiiftay ayay aragtay gacanteydii oo go’an iyo labaatankii diinaar ee aan watay markaas ayay aad uga murugootay.
Subaxii markii la gaaray oo aan huradadii kasoo kacay ayaan damcay inaan baxo markaas ayay I dhahday xagee rabtaa inaad tagto? Waxaana ugu jawaabay meel aan murugta isaga soo baabi’iyo.
Markaas ayay igu dhahday ha tagine e kaalay inta soo fariiso markii aan agteeda soo fariistay ayayna igu dhahday “jaceyl aad ii qabto ma waxaad gaartay heer aad hantidaada oo dhan igu bixisay ilaa ay waxba kuusoo hari waayeen oo gacantaadiina ku weysay? Allaah ayaa iiga marqaati ah inaan waligey kaa hari doonin hadalkeyga saxnaanshihiisana waan ku tusi doonaa.
Markaas ayaa gabadhii la igu mehriyay kadibna inta isoo waday ayay isoo hor istaajisay sanduuq weyn weyna furtay waxaana kasoo baxay mandiilyaal badan oo ahaa kuwii aan lacagta ugu keeni jiray kaawaasoo sidoodii ah lacagtiina ku jirto …
La soco qeybta 27aad.
Waxaa Aqrisay 1,387
Asxaabay shekadii cawa maxaa ku dhacay